Tilmaamo gaar ah oo lagu bilaabayo marxaladda naqshadeynta | Abuurista khadka tooska ah
Haddii aad ka mid tahay kooxdaas dadka ah ee doonaya inay bilaabaan a heerka naqshadeynta, qodobkaan runti wuu fiicnaan doonaa waana lagama maarmaan in la helo qof aqoon u leh waxa aqoonsiga muuqaalka, yaa garanaya sida loo saxo fiidiyoowga, loo sameeyo baraha internetka, barnaamijyada iyo calaamadaha.
Runtu waa taas maareeyuhu wuxuu ubaahanyahay shaqaale inuu awood u leeyahay inuu sameeyo wax kasta oo qof runtii tababaran yaqaan sida loo sameeyo ama qof aan hadda kaaliye ahayn u hoggaansamo tan.
Mushaharku had iyo jeer caqabad weyn ayuu ku noqon doonaa kaaliyaha markii uu dhabtii doonayo inuu qayb ka noqdo xirfaddan. Dabcan tan sidoo kale badiyaa way kala duwan tahay iyadoo kuxiran shaqada Haddii qofku doorto ama la shaqaaleysiiyo, xitaa sidaas oo ay tahay, waa in marwalba la xusuusnaadaa in daqiiqad kasta daqiiqado badan oo cusub wax laga baran karo.
Way dhici kartaa in munaasabado badan ay qasab kugu noqoto dir faylafooliyo, tan iyo inta badan kiisaska, faylalka tacliimeed ee ardaygu wuxuu noqdaa kan set oo casharro badan laga soo qaatay webka Photoshop, sawir gacmeedyo iyo soo celintii caadiga ahayd ee sawirradii hore ee qoyska.
Talo soo jeedintu waxay noqonaysaa inaan karno raadso bedel kale Taasi waxay awood u leedahay inay muujiso aragtida wax aan jecel nahay, sida haddii aad jeceshahay muusikada, isku day inaad raadiso wax muujinaya dhadhankaaga ku saabsan mawduucan oo ah in badan oo ka mid ah himilooyinka ay ardaydu leeyihiin markay qalin-jabiyaan jaamacad, waa taas rabto inaad u shaqeyso ururada waaweyn sida Google ama Facebook, taas oo dabcan tani noqon karto mid wanaagsan ama xun.
Haddii aad horey u heshay marxaladda naqshadeynta ee aad rabtay wax badanWaa inaad ku dadaashaa sidii aad daqiiqadaas gaarka ah uga dhigi lahayd khibrad aad u fiican.
Waqtigan xaadirka ah marwalba waa inaad weydiisaa su'aalo kasta oo xiiso leh iyo / ama xiiso leh, tan oo ka mid ah Marxaladaha nolosha taas oo dadku bilaabaan inay si tartiib tartiib ah u ogaadaan sida goobta shaqadu u shaqeyso.
Kaliya awood u lahaanshaha inaad weydiiso su'aalo ku saabsan xaalad kasta ama ku saabsan xalka wax waliba waa mid aad waxtar u leh in la fahmo haddii taasi ay tahay waxa aan runtii dooneyno, waxa kale oo kale oo aan raadin karno waqti dambe iyo tan ugu muhiimsanba, waa inaan ka fikirnaa hadaan runti nahay aragto adoo shaqadan oo kale qabanaya wakhti dheer oo soo socda.
Gabagabadii waxaan dhihi karnaa waa lagama maarmaan leeyihiin aqoon iyo xirfado software, laakiin ma aha wax aad u muhiim ah in la helo aqoonta oo dhan, iyada oo kaliya wax aasaasi ah ay ku filnaan karto in lagu bilaabo marxaladan qaabeynta ee goobta shaqada iyada oo aan loo eegin haddii aan ka bilowno shirkad weyn ama yar, maadaama aan had iyo jeer ka heli doonno khibrad.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Tilmaamo gaar ah oo lagu bilaabo marxaladda naqshadeynta
Coca-Cola oo ah astaan ​​ka badbaaday waqtiga